भेट्न लागि हाम्रो वेबसाइट र धन्यवाद स्वागत. हाम्रो साइट सबै पाङ्ग्रा मा सबै बारे छ, अधिक विशेष, Motorized पाङ्ग्रा! हामी तपाईं गाडी र सेवाहरू मा धेरै राम्रो जानकारी दिने मा योजना.
हामी मुख्य रूप मा ध्यान हुनेछ भनेर एउटा कुरा प्रयोग वाहन खरीद छ, यो एक कार वा ट्रक हो कि, मोटरसाइकल, एटीवी वा RV र सबै भन्दा राम्रो आफूलाई बचाउन कसरी. एक प्रयोग वाहन खरीद गर्दा धेरै ज्यादा सबै एउटै कुरा माथि दिइएका गाडी सबै लागू, RV गरेको संग जबकि तपाईं जाँच गर्न आवश्यक केही बढी कुराहरू त्यहाँ हुन सक्छ.
एक प्रयोग कार वा ट्रक खरीद मा तपाईं चालिहाल्नुपर्छ धेरै चरण हो. पढेर उपभोक्ता कार समीक्षा र उपभोक्ता कार रिपोर्ट गरेर आफ्नो गृहकार्य गर्न. विभिन्न कार मोडेल बारेमा तपाईं संग काम मान्छे र मित्र सोध्छन्. तपाईं खरीद मा रुचि हो बनाउन र मोडेल को ग्याँस खपत मा जानकारी भेला. प्रत्येक कार को विश्वसनीयता मूल्यांकन जाँच र costs.Most मानिसहरू प्रयोग सवारीसाधान खरीद को पासा रोलिंग जस्तै छ भनेर थाह गणना. तथापि, एक प्रयोग कार सूचीबारे को कदम निम्न आफूलाई बचाउन सबै भन्दा राम्रो तरिका छ, आफ्नो पैसा र जोखिम कम गर्न मदत.
कुरा एक गुच्छा छन् कि तपाईं खरीद विचार गर्दै छन् कि एक प्रयोग ओटो मा मूल्यांकन र जाँच गर्न पर्छ. वाहन भन्दा हेर, यो टायर आवश्यक गर्छ? तपाईं भित्र भुइँमा तेल स्पट देखेर छन्? परीक्षण कार ड्राइव, तपाईं ब्रेक लागू गर्दा, कार एक पक्ष वा अन्य पुल गर्छ? तपाईं यी कुराहरू र धेरै अन्य हेर्न छैन भने यो तपाईं निरपेक्ष भाग्य खर्च गर्न सक्छन्. तपाईं आफैलाई गर्न सक्छन् भनेर आफ्नो प्रयोग कार सूचीबारे छलफल गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा को एक वाहन इतिहास जाँच गर्न छ.
एक पूर्व-स्वामित्व कार वा ट्रक खरीद तपाईं एक निजी पार्टी वा प्रयोग कार डीलरशिप देखि खरीद कि कुनै फरक छ, तपाईं एक डीलरशिप देखि एक कार लागि अधिक तिर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई लागि बाहेक. प्रयोग कार सौदागर सामान्यतया आफ्नो टेक्नीसियन को एक उपयोग गर्छन छ प्रयुक्त कार सूचीबारे निरीक्षण र लिलाम मा किनेको वा किनबेच छन् कि कार जाँच गर्न, कारहरुको आफ्नो धेरै वा छैन मा बेचे सकिन्छ भने र त्यसपछि निर्धारण. पूर्ण जंक किनबेच र छन् छन् भनेर केही कार लिलाम मा बेचे गरिनेछ, र केही व्यापारीहरु धेरै मा बेचे गरिनेछ. अनि हो, मुद्दाहरू र यांत्रिक समस्या समेत कारहरुको को डीलरशिप गरेको धेरै मा बेचे गरिनेछ र तपाईं समस्या छ भनेर ती कार को एक खरीद माथि समाप्त कि एक हुन सक्छ. Ask the dealer to show youavehicle condition report that they have preformed on the vehicle, वा तिनीहरूले तपाईं खरीद विचार गर्दै वाहन लागि खरिद गरेका एक वाहन अवस्था रिपोर्ट.
निजी क्षेत्र द्वारा बिक्री को लागि प्रयोग कार (मालिकद्वारा बिक्री को लागि) वाहन ठीक मालिक द्वारा हेरविचार लिएका गरिएको छ किनभने विचार को संभावित खरीदारों धेरै आकर्षक छन्, र तिनीहरूले प्रयोग कार डीलरशिप द्वारा बेचे भइरहेका छन् कि कार र ट्रक तुलना मालिक देखि सीधा यो किन्न भने तिनीहरूले एक वास्तविक सौदा प्राप्त गर्न सक्छन् कि. आफ्नै मा आफ्नो कार बेच्नु कि मानिसहरू एक डीलरशिप छ कि लागत को सबै छैन. यो मालिकको द्वारा बिक्री को लागि हो कि प्रयोग कार एक प्रयोग कार डीलरशिप मा यस्तै कार भन्दा एक पुरा धेरै कम खर्च गर्न अनुमति दिन्छ.
एक निजी व्यक्तिगत देखि खरीद तापनि सक्छन् एक सानो अधिक जोखिमपूर्ण हुन. You need to be concerned with whether or not the odometer has been tampered with. And with an private seller andadealership you need to be concerned whether or not the vehicle has been inabad accident or not. अनि एक निजी विक्रेता संग, तिनीहरूले साँच्चै वाहन नै गर्छन् (कार चोरी भएको छ)?
तपाईं माथि आफूलाई जोगाउन गर्न सक्छन् सर्वोत्तम कुराहरू एक अनलाइन जाने र अनलाइन वाहन खोज गर्न छ. यो सम्भव ओडोमिटर tampering तपाईं सचेत मदत गर्नेछ, प्रमुख दुर्घटना र वाहन चोरी वा छैन भने.
र अन्तमा, तपाईं वाहन आफ्नो मिस्त्री द्वारा बाहिर जाँच हुन सक्छ भने तपाईं वाहन खरीद गर्नु अघि गर्नुपर्छ एउटा कुरा सोध्न छ. आशा छ तपाईं भरोसा एक मिस्त्री र राम्रो पटक भन्दा वाहन दिनेछु र कुनै पनि संभावित समस्या को तपाईं चेतावनी.
हाम्रो साइट रूपबाट रहन यो निर्माण अन्तर्गत छ र हामी निरन्तर यो अद्यावधिक र बहुमूल्य जानकारी प्रदान गरिनेछ रूपमा.
यहाँ एक प्रयोग कार खरीद गर्दा लागि हेर्न कुराहरू लागि बहुमूल्य जानकारी दिन्छ कि हामी फेला ठूलो भिडियो छ –